I-FreeTube, umxhasi we-YouTube kwi-Ubuntu desktop | Ubunlog
UDamien A. | 25/09/2021 14:14 | Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFreeTube. Yi le Umxhasi we-YouTube ozimeleyo ufumanekayo kwiGnu / Linux, Mac kunye neWindows. Umxholo weFreeTube kukubonelela ngomxholo wabasebenzisi beYouTube, ngaphandle kokuthwala ugcino lukaGoogle.
Umdlali womthengi iya kusinika amava apheleleyo ngaphandle kweentengiso. Njengoko asizukusebenzisa isidlali esidibeneyo seYouTube, uGoogle akazukulandela umkhondo "weembono" zeevidiyo esizibonayo. IFreeTube ithumela kuphela iinkcukacha zethu ze-IP.
Isimahla isebenzisa i-YouTube API ukukhangela iividiyo kunye ne-HookTube API yokubamba iifayile zevidiyo ezingacacanga kwaye uzidlale kumdlali wevidiyo. Imirhumo, imbali kunye nevidiyo ezigciniweyo ziya kugcinwa apha kwikhompyuter yomsebenzisi.
1 Iimpawu ngokubanzi zeFreeTube
2 Ukufaka iFreeTube ku-Ubuntu
2.1 Njengephakheji ye-DEB
2.2 Njengephakheji yePlppak
3 Ukujonga ngokukhawuleza kwiFreeTube
Iimpawu ngokubanzi zeFreeTube
Yiyo isoftware yasimahla, yasimahla kunye neqonga.
Sinokubona iividiyo ngaphandle kwentengiso.
Siza kusinika i ukubanakho ukubhalisela amajelo ngaphandle kokuba neakhawunti.
Wethu Imirhumo, imbali kunye neevidiyo ziya kugcinwa ekuhlaleni.
Siza kufumana iqhosha kumdlali oza kukwazi khuphela iividiyo.
Siya kuba nazo ukuba sizisebenzise kwinkqubo yenkqubo umxholo okhanyayo okanye omnyama njengoko sifuna.
Inkqubo yenkqubo ingaguqulelwa kwi iilwimi ezahlukeneyo, phakathi kwazo sisiSpanish.
Sinako ukuseka eyahlukileyo amacebo okucoca ulwelo xa uphendla.
Ukufaka iFreeTube ku-Ubuntu
I-FreeTube iyafumaneka kubasebenzisi baka-Ubuntu kunye nolunye usasazo. Kwinkqubo yethu yokusebenza, siya kudinga faka iFreeTube usebenzisa iphakheji ye-DEB esinokuyifumana kwifayile ye- iphepha lokukhupha yeprojekthi.
Ukongeza kokukwazi ukukhuphela iphakheji usebenzisa isikhangeli sewebhu, ikwanjalo singasebenzisa isixhobo wget ngolu hlobo lulandelayo ukusuka kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Nje ukuba ukhuphelo lwefayile ye-DEB kwikhompyuter yethu igqityiwe, siya kuba nakho qalisa ukufakwa ukusuka kwiFreeTube. Singakwenza oku ngokubhala umyalelo kwisiphelo esinye:
Emva kofakelo, sinako fumana umthumeli wale nkqubo kwiqela lethu.
IPodemos khipha inkqubo efakiweyo kunye nephakheji yayo ye-DEB ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokuchwetheza kuyo:
Singayifaka le nkqubo njengephakheji flatpak. Ukuqhubeka nofakelo, kuyakufuneka ukuba le teknoloji yenziwe isebenze kwizixhobo zethu. Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04 kwaye ungazifaki ezi phakheji, ungaqhubeka Isikhokelo ukuba ugxa wakhe wabhala ngayo.
Xa unokufaka iiphakheji zeplppak kwinkqubo yakho, kuya kufuneka uvule i-terminal (Ctrl Alt T) kunye baleka kuyo myalelo:
Emva kokuba ufakelo lugqityiwe, ungaqalisa usetyenziso ngomyalelo:
IPodemos susa iphakheji yeplppak kule nkqubo ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokuchwetheza kuyo umyalelo:
Sinokuyisebenzisa le nkqubo Ukukhuphela kwi iphepha lokukhupha ifayile yeAppImage yale nkqubo. Siza kuba nakho ukusebenzisa i-wget ngale ndlela ilandelayo yokukhuphela ifayile yenguqulo yamva nje epapashwe namhlanje:
Xa igqiba ukukhuphela, kuya kufuneka nika imvume yokwenza ifayile. Siza kwenza oku ngomyalelo:
Emva koko sinako yazisa inkqubo ngokunqakraza kabini kwifayile okanye ngokwenza umyalelo kwisiphelo sendlela:
Ukujonga ngokukhawuleza kwiFreeTube
Xa isicelo sivulekile, kuya kufuneka senze njalo jonga ibhokisi «Khangela / Yiya kwi-URL». Emva koko kuya kufuneka sibhale kuphela into esifuna ukuyibona kwiYouTube kwaye ucinezele iqhosha lokungena ukuze ubone iziphumo.
Siza kuba nakho ukubona iziphumo zophando kwiscreen senkqubo, kwaye phakathi kweevidiyo zeziphumo fumana ividiyo esinomdla wokuyibona. Xa sifumana ividiyo esifuna ukuyibona kwisicelo seFreeTube, kuya kufuneka siklikhe nje kwi-thumbnail ngemouse..
Xa sikhetha ividiyo kwiziphumo zokukhangela, iFreeTube iya kulayisha ividiyo yeYouTube kwi-app kwaye iyibonise.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba ubhalisele iYouTube yethu kwiFreeTube ngaphandle kwesidingo sokubhalisa eqongeni. Ukuba sinomdla wokubhalisela ijelo, okokuqala siza kujonga ibhokisi yokukhangela «Khangela / Yiya kwi-URL» kwaye apho siza kubhala esikukhangelayo.
Kwiziphumo zophando, kuya kufuneka sicofe ijelo kuphela. Xa sifikelela kwisitishi, siya kufuna kuphela ukucofa kwiqhosha «Bhalisa». Nje ukuba sikhethe eli qhosha, ijelo liya kongezwa kwindawo "yokubhaliselwa" yeFreeTube.
IFreeTube sisoftware yasimahla esinokuthi siyisebenzise, ​​sifunde, sabelane ngayo kwaye siyiphucule ngokuthanda kwakho.. Ngokukodwa, sinokusasaza kwakhona kunye / okanye siyiguqule phantsi kwemiqathango yeGNU General Public License epapashwe yiFree Software Foundation.
Inokufumaneka Olunye ulwazi malunga nale nkqubo kwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » I-FreeTube, umxhasi we-Youtube kwidesktop ka-Ubuntu
NgePlasma 5.23 beta esele isitalatweni, i-KDE iqala ukugxila kokutsha kwiPlasma 5.24